Ebee ka ọdịnaya? | Martech Zone
N'abalị a, m pịa na njikọ njikọ ma merụọ elu na saịtị a. Onwere ozi di na peeji a ebe? (E nwere… M pụta ìhè ya uhie). Nke a bụ nnọọ nzuzu! Onye choro igu akwukwo a? Enwere mgbasa ozi, na-egbu maramara, na-akpụ akpụ ụgbọala, na-ese n'elu mmiri s dị nnọọ nzuzu. Ka a sịkwa ihe mere na anaghị m aga saịtị ndị a. Apụghị m ịchọta ọdịnaya iji gụọ!
Nke a bụ ajọ njọ nye onye nta akụkọ ahụ doro anya na ọ nọrọ oge ụfọdụ na edemede (na agụghị m ya). M enweghị ike na-eche nke ihe Ẹkot… ikekwe na-ekiri a 3 nkeji TV show na 27 nkeji nke mgbasa ozi.
Ọkt 3, 2006 na 12:04 PM
Ekwenyere m kpam kpam Doug. Ọ na-eju m anya mgbe m hụrụ saịtị dị ka nke a ma ọ bụrụ na ha na-ede maka ego mgbasa ozi ma ọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ. Onwe m na saịtị dị ka nke ahụ, m na-eme ya ozi B NOTGH to pịa mgbasa ozi ọ bụla.
Dị ka ndị na-ede blọgụ anyị na-agbasi mbọ ike na ole "ihe" fancy gụnyere na blọọgụ anyị. Amalitere m ihe ọhụrụ na blọọgụ m na njedebe nke izu m na-eziga nchịkọta nke weebụsaịtị ndị akpọrọ The Imus Show. Nwunye m na Liz dị ka Blog na-aga nke ọma na-eche na ọ bụ ụdị ihe na-agwụ ike na ọ ga-agbasasị ntakịrị. Ma asị m iwepụ ndị na-achọ ihe ọmụma, ọ bụghị ihe eserese mara mma. Ọ naghị enyere m aka na enweghị m ọkpụkpụ na-eme ihe n’ahụ́ ma a bịa n’ihe gbasara nka.
Debe ihe ndị ahụ. Ahụrụ m blog gị n'anya.
Ọkt 3, 2006 na 2:48 PM
Daalụ, Roy! Enwere m ekele maka nkwado ahụ. Ọ pụtara ọtụtụ!